OMN: Dhiibbaan Siyaasaa Hojii Keenyarraa Nu Hin Dhaabu!! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOMN: Dhiibbaan Siyaasaa Hojii Keenyarraa Nu Hin Dhaabu!!
Ibsa OMN irraa Kenname
Duula bal’aa karaa addaa addaa Oromiyaa Miidiyaa Network (OMN) irratti adeemsiifamaa jiru ilaalchisee waantoota muraasa dhageeffattootaa fo daawwattoota keenya hubachiisuu barbaanna. Akka armaan gadiitti dhiyaateera.
OMN akka Miidiyaatti biyya keenya keessatti mirgootni namoomaafi demokraasii kabajamanii, sirni haqaa akka jiraatuuf ijaafi gurra uummataa tahee waggoottan ja’an dabran tajaajileera. Waxabajii bara 2010 ykn 2018 ALA irraa eegalee ammoo biyya keessa seenuun ogummaafi Sansaka Miidiyaa guuttachuudhaan hayyama mara argatee Hojii tamsaasa TV karaa Saatalaayiitiifi Miidiyaalee hawwaasaa cimsee itti fufee jira. Jijjiirama abdiin irra kaawwatamee ture mirkaneessuu keessattis akka Miidiyaatti gahee murteessaa bahachaa turuusaa kan waakkatamu miti. Gama kanaan cehumsa biyyi keenya gara diimokiraasiitti taasiftu bu’uura amansiisaa irratti hundeensaa akka gad dhaabbatuuf akka miidiyaattis of kennee hojjechaa bahe; ammas hojjechaa jira.
Akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti Onkolooleessa bara 2012 irraa kaasee garuu dhiibbaan addaa addaa OMN irratti taasifamaa jiru. Dhiibbaan kunis guyyuu bifa jijjiirachaa, jabaachaa dhufuusaa hordoftoonni keenya sirriitti hubatu jennee abdanna.
Himannaa Nurratti Dhiyaatee fi Deebii OMN:
1ffaa. Dhiittaa mirga namoomaa haala suukanneessaan raawwatame keessatti hirmaannaa aangawaan mootummaa tokko ilaalchisee, Dookimantarii ‘Muudamamoo Adaba?’ jedhu ragaawwaan qabatamoo funaannee hojjechuun qilleensarra oolchine ilaalchisuun, himatni OMN irratti dhiyaate ture. Dookimantariin kun bakka dhiittaan mirga namoomaa itti raawwate deemuudhaan ragaa namaafi kan biroo qindeessuudhaan ulaagaafi naamusa ogummaa barbaachisaa guuttatee kan hojjetame yoo ta’u, himatni nurratti dhiyaate fudhatama kan hinqabne ta’uusaa, anagawaan mootummaa dhimmi kun ilaallatus afeerraa ykn carraa komii irratti dhiyaate ofirraa faccisuu danda’usaa barreeffamaan dhiyeessineefii, yaada wal madaalaa dhiheessuuf yaallus angaawaan kun carraa kanatti osoo hin fayyadamin hafuusaallee, barreeffamaan caqasnee ibsuudhaan deebii quubsaa kennineerra. Himanni kunis deebii nuti deebisne kanaan achumarratti dhabbateera.
2ffaa. Rakkoo hammaataa saboota Qimaant, Agaw fi Oromoota mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiraatan irratti raawwatamee ilaalchisee gabaasa OMN hojjete irratti himannaan mootummaa naannoo Amaaraatiin nurratti dhiyaate ture. Gabaasootni OMN rakkoo saboota kana irra gahaa ture ilaalchisee dhiyeesse marti naamusaafi seera ogummaa irratti kan hundaa’an, odeeffannoo sirrii fi haqaa ta’u ibsinee deebii gahaa ragaa waliin caqasuun dhiheessineerra. Kana malees faccisa nuti himata nurratti baname kanaaf dhiheessine kana ilaalchisee, deebii keenyatti quufuu yoo dadhaban ykn yaada moriimii yoo qabaatan Mootummaan naannoo Amaaraa OMN irratti, odeeffannoo qabatamaa gabaasa keenya kuffisu danda’u dhiyeeffachuu akka danda’an barreeffamaan carraan kennamuufis, qaamni dhiyaatee yaadaa ykn mormii dhiyeeffatu waan hin argamneef himatni sunis deebii keenyaan kufaa ta’ee achiin hafe.
3ffaa. Yunivarsiitiiwwan mootummaa naannoo Amaaraa jiran keessatti rakkoo barattoota Oromoorra gahaa ture ilaalchisee gabaasa OMN dhiheesseef, himatni Minsteera Saayinsii fi Barnoota Olaanaatiin nurratti dhiyaate ture.
Himatni kunis kanneen armaan olitti dhiyaatan wajjin walfakkaataa kan tureedha. Rakkoon kun sadarkaa biyyatti ajandaa guddaa kan ture, mootummaa amanee tarkaanfii addaa addaa fudhachaa kan ture ta’uun osoo beekamuu OMN gabaasuu isaatiif himatameera. Kanaafis ragaa amansiisaafi haqaarratti hundoofnee gabaasoota kana dalaguu keenya ibsinee deebii quubsaa dhiyeessineerraaf. Kana malees rakkoo Yunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa jiran keessatti mudate ilaalchisee minsteerri saayinsiifi Barnoota Olaanaa gama isaatiin yaadaa fi odeeffannoo qabu hawaasaa biraan ga’uuf karaa OMN akka dhiyeessuuf carraa kennameefii karaa bakka bu’aa isaa si’a lama dhiyaatee yaadaa bal’aa dabarfatee jira.
4ffaa. Haasaa Barsiisaa Haayile Mikaa’eel Taaddasee tamsaasa kallattii walga’ii KFO Fiichee fi Gabragurrachaatti taasisan ilaalchisee qaama ‘Peetiroosawiyaan YeOrtodoksi Tewahidoo Betekirstiyaan Kibirinnaa mabet asxebaaqii Hibreet’ jedhamuun OMN irratti himata dhiyaatee dha. Himannaan kun kan OMN irratti dhiyaate haasaan Barsiisaa Haayile Mikaa’eel sun tamsaasa kallattiin kan dabre tahuu osoo beekamuu, qabiyyeee isaa editooriyaalii OMN kan bakka hin buune tahuun osoo beekamuu, gahee paartii, Miidiyaa fi nama dhuunfaa adda osoo hinbaasin kan nurratti dhiyaate ture. Haata’u malee, himannaa kanaafis deebii quubsaa tahe ragaafi heeraan deggeruun kennineefii jirra.
Himata kana irratti falmii irra osoo jirruu Abbaan Taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa (ATBI) tasa xalayaa Akeekachiisaan nuun gahe. Xalayaan sun qaama raawwachiistoota mootummaa Dhimmichi kallattiin hin ilaallanneef garagalcha tahuun ammoo ergama Siyaasaa of keessaa qaba shakkii jedhu akka qabaannu nu taasise. Barreeffamuu xalayyaa akeekkachiisa kanaan duratti Abbaa Taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa waliin OMN hariiroo Hojii gaarii qaba ture. Dhiyeenya kana jilli ATB hoggansaafi ekispeertoota of keessatti hammate gara Istuudiyoo keenyaa dhufee, daawwannaa taasisuun, bulchiinsaa fi gaazexeessitoota OMN faana marii’atee gorsa barbaachisaas kennee ture. Hariiroo Hojii jiruttis gammadaa tahuu nuuf ibseellee ture. Himata kana ilaalchisee murtii nurratti dabree irratti ol iyyannoo dhiyeefannee jirra.
Gama biraatiin dugduubii (feedback) hojii gama ATB tiin barreeffamaan nuuf ergamaa turan illee, wantoota gaarii of keessaa qabaatus, dhimmoota walfalamsiisan hanqina miidiyichaa godhee dhiheesseera. Fakeenyaaf OMN afaanoota hanga 7 taa’aniin kan tamsaasu ta’uun osoo beekamuu, ilaalchaafi yaada namoota /garee muraasa qofa dhiyeessa komiin jedhu xalayicha keessatti caqafameera. Kana malees yeroo Ayyaana Irreechaatti alaabaa qabsoo Oromoo fi alabaa abbaa gadaatti fayyadmnee ayyaana sana miidhagsuuf kan OMN hojjete, akka waan ejjennoo siyaasaa paartii tokkoo qofa tarkaanfachiisuutti fakkeessuun achi keesatti caqafameera. Kunis tarii OMN irratti tarkaanfii fudhachuu abbalaniif akka ragaatti wantoota isaan ol kaawwachuuf yaalanidha shakkii jedhu akka qabaannu taasiseera.
Dhibbaa fi Duula Jidduu kana OMN irratti Raawwatame
Gaafa March 08, guyyaa dubartootaa ilaalchisee marii qophaa’e irratti afeeramuudhaan OMN uwwisa miidiyaa laatee tamsaasa kallattiitiin saganticha dabarsaa tureera. Sagantaa sanarrattis hirmaattuun tokko yaadaa dhuunfaa ishee kallattiin dhiyeessitee wajjin walqabatee duula qindaa’aafi guddaa OMN irratti banamee jiru, sabni keenya sihaa’inaan hordofaa akka jirtan ni hubanna. Taateen kun OMN balleessuuf yeroon isaa amma jedhanii humnootni socho’an jiraachuu isaallee ifa taasiseera. Dhimmichi kan ogummaa miidiyaa tahuun hafee duula siyaasaa ta’uu isaas hubannerra. Kana kanneen mul’isan keessaa tokko, dhimma hordoffii miidiyaalee irratti aangoo kan qabu ATB tahee osoo jiruu, aanga’aan waajira Minsteera Muumichaa, Obbo Nugusuu Xilaahuni fi Daqon Daan’eel Kibrat yaada ajaja fakkaatu dursanii gaafa 30/06/2012 karaa Fana Broadcast Corporate /FBC/ dabarsuu isaaniiti. Miidiyaan Faanaa Biroodkaast Koropireet /FBC/ yaada nama dhuunfaa tamsaasa kallattii OMN irratti gaafa March 08 dabre ilaalchisee oduu, sagantaa fi Vox Pop bal’inaan hojjetee dabarsaa tureera. Waan hedduu nama ajaa’ibu garuu oduu fi sagantaa kana mara yeroo hojjetutti, OMNiin akka qaamni dhimmi isaa kallattiin ilallatuutti dubbisee yaada fudhatee sagantaasaatti hin edaane. Gochi kunis miidiyaan kun hagam loogiidhaan OMN irratti duulaa jiraachuu isaa kan mul’isudha. Gama OMN’tiin imaammatni akka miidiyaatti hordofnu nu daangeesseetu hanqina miidyaalee biroo irratti hin xiyyeeffanuuf malee, midiyaaleen hojii biyyatti diigu, jibba sabootaa irratti xiyyeeffatanii hojjetaniifi odeeffannoo sobaa tamsaasan akka jiran ni hubanna.
Namuu sirriitti akka hubatu kan barbaannu OMN miidiyaa qabsoo tahee kan dhalate, jijjiirama kan fide, yeroo ammatti ammoo waantoota miidiyaa walabaa tokko irraa barbaadamu mara guuttattee, ogummaa fi caasaa jabaatiin of ijaaree miidiyaa hojjechaa jiruudha. Walabummaa miidiyaa, walabummaa yaadaa fi ijaarsa sirna diimokiraasii fi haqaa keessatti akka miidiyaatti gatii guddaa baasaa yoona waan gaheef sodaachiisaafi duula irratti geggeeffamu sodaatee hin jilbeenfatu. Seeraa fi heera biyyattii eegee akka miidiyaa walabaa tokkootti hojii isaa itti fufa.
Kallattii Xiyyeeffannoo Keenyaa
OMN maaliif dhimma uummata Oromootiif xiyyeeffannaa addaa kennee hojjeta? Gaaffii jedhu nammoonni dhiyeessan heddumminaan akka jiran ni hubanna. Kun dugdeebii ATB illee ni dabalata. Akka OMN’tti dhugaa nuti waakkachuu hin barbaanne tokkootu jira. Innis OMN kan inni jalqaba hundeeffameef rakkoo haqina miidiyaa hammaataa saba Oromoo mudatee ture furuun saba kanaaf ijaa fi gurra ta’uuf. Haata’u malee saba kana irratti xiyyeeffannee hojjenna yeroo jennu, sabootaa fi uummattoota birootiif carraa hin laannu jechuu keenya akka hin taane hojiin keenya ragaa nuuf baha. Yeroo ammaatti OMN afaanoota torbaan: Afaan Oromoo, Afaan Amaraa, Af-Somaalee, Sidaama, Walaayitaa, Adiyaa fi Alaabaatiin qophii isaa tamsaasaa jira. Miidiyaan afaanoota kanaan walfaana hojjetu OMN qofa.
Miidiyaan mootummaa kan gibra uummatarraa sassaabamuun hundeeffamaniif isumaan jiraatan illee sadarkaa kanatti afaanoota addaa addaatiin hojjechaa hin jiran. Haata’u malee Afaan Amaaraatiin qofa torban guutuu kanneen hojjetan OMN miidiyaa gartuu muraasaa godhanii dhiyeessuuf yeroo yaalan arguun nama ajaa’iba. Duulli amma OMN irratti geggeefamaa jiru kaayyoo siyaasaa of keessaa qaba kan jennuufis kanaaf. Gama kanaan hoji manee qaamota dhimmi ilaallatuuf kennuu barbaanna. OMN sadarkaa ogummaa gaazexeessummaa fi hojimaata midiyaatiin kanneen biroo yoo caale malee gad akka hin taane sirriittti beekna. Qaamni walabaa kana hubachuu barbaade, dhimma kana madaalee dhiyeesuuu ni danda’a. OMN yoommiiyyuu yaada kanaafis karrisaa banaa dha.
Daawwattootaa fi Dhaggeeffattoota keenyaaf kan waadaa gallu, yoomiyyuu taanaan walabummaa miidiyaa, walabummaa yaadaa akkasumas saboota sagalee hinqabneef sagalee ta’uu akka OMN’tti cimsinee itti fufna. Gama kanaan ejjennoo yoomillee hin jijjiiramne qabna. Sabni Oromoo rakkoo hanqina miidiyaa walabaatiif saaxilamee, hojii abbootii hirree jalatti akka kufu itti hin dhiifnu. Waggoottan ja’an dabran akka hojiin mul’ifne aarsaa barbaachisaa baafnee hojii miidiyaa walabaa itti fufna. Uummanni keenyas kana hubatee ijaa fi gurra isaa kan ta’e OMN dhiyeenyatti akka hordofuufi tumsu ni yaadachiifna.
Mootummaadhaaf- dhaamsa nuti qabnu: guca demokiraasii ammaan tana mul’atte inumaayyuu boodatti deebsuudhaan walabummaa miidiyaa ukkamsuu osoo hin taane sirna diimokiraasii hundaaf tolu caalmaatti waliin gabbisuutu furmaaata. Dhiibbaa siyaasaafi sodaachiisaan miidiyaa deggersa uummataa guddaa qabu hojii ala gochuuf yaaluun qaama kamiiniyyuu hin fayyadu. Kun tooftaa yeroo danuu yaalamee, irra deddeebi’ee kufee dha. Kana irra deebi’anii yaaluun bu’aan isaa dhamaatii qofa.
Miidiyaaleedhaaf: walabummaa miidiyaa fi danummaa yaadaa caalmaatti gabbisuudhaaf, dhaabbata miidiyaalee cimsuudhaaf dantaa waloo irratti waliin hojjechuutu hunda keenyaaf faaydiaa qaba. Miidiyaa tokko irratti walfaana duullee balleesina jedhanii yaaduun, haala miidiyaa mara guutummaatti dhabamsiisuu danda’u akka uumu hubachiisuu feena.
Dhuma irratti, miidiyaalee fi namoonni duula gama danuutiin nurratti baname kana balaaleffachuudhaan walabummaa miidiyaa fi yaadaa faana dhaabbataniif galata guddaa dhiyeessina!
Finfinnee, Oromiyaa- Itoophiyaa
Daddaaqaama siyaasaa yeroof nu muudateen aarsaa yeroo dheeraaf kaffaallee gatii hin dhabsiisnu Caamsaa 31/2019 Laabsii…